TOROHEVITRA ARAKA NY LALÀNA AN-TSERASERA MANODIDINA NY FAMANTARANANDRO
Toro-hevitra azo na amin’ny fotoana feno (fivoriana miaraka amin’ny mpahay lalàna) sy ny fifandraisana — amin’ny alalan’ny mailaka, ny an-telefaonina
Na izany aza, toy ny fitsipika, isan-karazany ny taratasy fakan-kevitra somary nihena ho fakan-kevitra anatiny ny mpahay lalàna, araka ny mailaka na finday ny mpahay lalàna dia tsy maharitra sy amim-pieritreretana ifanakalozy hevitra Ny olana, handinika Ny antontan-taratasy.
Ny endrika ny resaka an-tariby na ny taratasy no mety afa-tsy ho an’ny mpandeha: toy Ny mpisolovava, sy ny mpisolovava Ny olana. An-telefaonina ny mpahay lalàna, ohatra, dia azo inoana fa ho vetivety valin — dia azy mba hiatrehana Ny olana na tsy izany, dia ho tombanana»ny lanjan’ ny olana,»ary mandamina ny fotoana sy ny toerana ny fivoriana miaraka amin’ny mpahay lalàna.
Mailaka ny mpisolovava afaka manome bebe kokoa amin’ny antsipiriany ny valiny, dia matetika ny olana alefa, ka ny mpahay lalàna dia tsy tompon’andraikitra, raha toa ka afaka manampy ahy izany zavatra izany, saingy indraindray dia manontany fanontaniana mazava izany fa ny mpanjifa sy ny mpisolovava mba hanomanana tsara ny ho an’ny fakan-kevitra any amin’ny fivoriana manokana.
Hiomana avy hatrany mba hahazoana antoka fa ny mpahay lalàna dia inoana mba ho vonona ny hihaona Aminao»izao ankehitriny izao», na io safidy io dia tsy voahilika. Na izany aza, ny mpahay lalàna no nanomana ny asa fandaharam-potoana noho ny andro mialoha, izay mazava ho azy fa azonao atao hatrany ny mitady maimaim-poana»varavarankely»mba hitsena Anao.
Ny fivoriana dia mety ho natao toy ny bar, sy ny amin’ny mety tsy miandany toerana (toy ny trano fisotroana kafe) amin’ny alalan’ny fanendrena amin’ny mpisolovava
Ny fitsidihana ny mpisolovava ny toeram-ponenana dia tsy mifanaraka amin’ny fepetra ny fehezan-dalàna mifehy ny mpisolovava